शीर्षकमा बाइबल पदहरू: योजनाहरु -> भगवान
मानिसले “यसो गरूँला, त्‍यसो गरूँला” भन्‍दै सबै प्रकारको युक्ति गर्ला तर परमप्रभुको उद्देश्‍य नै पूरा हुनेछ।
पाउन सकेजति सरसल्‍लाह लिनू र आफ्‍नो काममा सफल हुनेछौ, सल्‍लाहबिना विफल हुनेछौ।
तर उहाँका योजनाहरू सधैँभरि रहँदछन्, उहाँका सङ्कल्‍पहरू अनन्‍तकालसम्‍म रहिरहन्‍छन्।
आफूले गर्ने काम परमप्रभुलाई सुम्‍पिदेऊ र तिम्रा योजनाहरू सफल हुनेछन्।
तिमीलाई उहाँले तिम्रा इच्‍छाअनुसार देऊन् र तिम्रा सबै योजनाहरू सफल गराऊन्।
राष्‍ट्रहरूले चाहेका उद्देश्‍य परमप्रभुले विफल गर्नुहुन्‍छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्‍ना युक्ति पूरा गर्नदेखि रोक्‍नुहुन्‍छ।
“यदि कसैले धरहरा बनाउन चाहन्‍छ भने पैसाले पुग्‍छ कि पुग्‍दैन, कति खर्च लाग्‍छ, सबै हिसाब पहिले नै गर्नुपर्छ, होइन र?
 यो संसारको निम्‍ति मेरो युक्ति हो र जाति-जातिलाई सजायँ दिन मेरो हात उचालिएको छ।” सर्वशक्तिमान् परमप्रभुले त्‍यसो गर्न निश्‍चय गर्नुभएको छ। सजायँ दिनलाई उहाँले आफ्‍नो हात उचाल्‍नुभएको छ र कसैले उहाँलाई रोक्‍न सक्‍दैन।
मलाई पठाउनुहुने पिताले मकहाँ आउने मन दिनुभएन भने कोही पनि मकहाँ आउन सक्‍दैन, मकहाँ आउने जतिलाई म संसारको आखिरी दिनमा जीवित पार्नेछु।
धनी बन्‍नलाई साह्रै नघोटिओ, बुद्धिमानी भई त्‍यसो गर्न छोड।
हामीलाई सिकाउनुहोस् कि हाम्रो जीवन कति छोटो छ र हामी बुद्धिमान् बन्‍न सकौं।
 मेरो प्राण ठूलो कष्‍टमा छ। हे परमप्रभु! कहिलेसम्‍म मेरो सहायता गर्न तपाईंले ढिलो गर्नुहुनेछ? परमप्रभु! आउनुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्। आफ्‍नो करुणाले मलाई मृत्‍युबाट बचाउनुहोस्।
 “हे याकूबका सन्‍तानहरू हो, मेरो कुरा सुन। मेरा प्रजाबाट बाँकी रहेका सबैले सुन। तिमीहरू जन्‍मेको घडीदेखि मैले तिमीहरूको हेरचाह गरेको छु। म तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ, तिमीहरू बुढो भएर केश पाक्‍दा पनि म तिमीहरूको हेरचाह गर्नेछु। मैले तिमीहरूलाई बनाएँ र तिमीहरूको हेरचाह गर्नेछु, म तिमीहरूलाई मद्दत गर्नेछु र छुटकारा दिनेछु। “तिमीहरू मलाई कोसँग तुलना गर्नेछौ?” परमप्रभु सोध्‍नुहुन्‍छ, “के मजस्‍तो अरू कोही छ? मानिसहरूले आफ्‍ना थैलाहरू खोल्‍छन् र सुन निकाल्‍छन्, तराजुमा चाँदी जोख्‍छन्। सुनारलाई ज्‍याला दिएर देवताको मूर्ति बनाउन लगाउँछन् र घोप्‍टेर त्‍यसलाई पुज्‍छन्! तिनीहरूले त्‍यसलाई काँधमा लिएर बोक्‍छन्, त्‍यसका ठाउँमा राख्‍छन् र त्‍यो त्‍यहाँ खडा रहन्‍छ। त्‍यहाँबाट त्‍यो यताउता सर्न सक्‍दैन। कसैले त्‍यसलाई प्रार्थना गर्‍यो भने त्‍यसले उत्तर दिन सक्‍दैन वा कुनै आपत्-विपत्तिबाट जोगाउन सक्‍दैन। “हे पापीहरू हो, याद राख। मैले के गरें, सो विचार गर। धेरै अघि नै के भएको थियो, त्‍यो याद गर। म मात्र परमेश्‍वर हुँ र अरू कोही मजस्‍तो छैन भनी स्‍वीकार गर। सुरुदेखि नै अन्‍तिम नतिजा के हुने हो, मैले अघिबाटै भनिसकेको छु, मैले भनेको थिएँ कि मेरा युक्तिहरू सफल हुनेछन् र आफ्‍नो इच्‍छाअनुसार म सबै कुरा गर्नेछु। मैले एउटा मानिसलाई पूर्वबाट बोलाएको छु, बाजझैँ झम्‍टेर आउनेछ र मेरो युक्ति पूरा गरिदिँदछ। म बोलेको छु र यो हुन्‍छ नै।
सार्वभौम परमप्रभुले आफ्‍ना सेवक अगमवक्ताहरूलाई आफ्‍नो योजना प्रकट नगरी केही काम गर्नुहुन्‍न।
 तिमीहरूका बीचमा लडाइँ र झैझगडा कहाँबाट आउँछन्? मोजमज्‍जा गर्ने चाहनाले होइन र? जुनचाहिँ तिमीहरूका मनभित्र तँछाड र मछाड गरिरहेका हुन्‍छन्। आफूले चाहना गरेको कुरा नभेट्दा नै मारकाट चल्‍छ। तिमीहरूलाई कुनै कुरा नभई हुँदैन अनि त्‍यो पाउन नसक्‍दा लडाइँ र झैझगडा गर्छौ। परमेश्‍वरसँग नमागेकोले तिमीहरूले खोजेको कुरा पाउँदैनौ। माग्‍यौ भने पनि तिमीहरू मोज-मज्‍जा गर्ने दुष्‍ट विचारले माग्‍छौ र पाउँदैनौ। अविश्‍वासी मानिसहरू हो! संसारलाई माया गर्ने परमेश्‍वरको शत्रु हुन्‍छ भनी तिमीहरूलाई थाहा छैन? संसारलाई मित्र बनाउन खोज्‍नेले परमेश्‍वरलाई आफ्‍नो शत्रु बनाउँछ। “परमेश्‍वरले हामीभित्र राखिदिनुभएको आत्‍माचाहिँ तृष्‍णाले भरिएको हुन्‍छ,” भन्‍ने धर्मशास्‍त्रमा लेखिएको कुरा व्‍यर्थको नठान। तर उहाँले गर्नुभएको अनुग्रह अझ बलियो छ। धर्मशास्‍त्रमा लेखिएको छ, “परमेश्‍वरले घमण्‍डीहरूको विरोध गर्नुहुन्‍छ तर नम्रहरूमाथि अनुग्रह खन्‍याउनुहुन्‍छ।” यसैकारण परमेश्‍वरको अधीनमा बस। शैतानको विरोध गर र त्‍यो तिमीहरूदेखि भाग्‍नेछ। तिमीहरू परमेश्‍वरको नजिक आओ र परमेश्‍वर पनि तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। पापीहरू हो, आफ्‍ना हात धोई सफा गर। कपटीहरू हो, आफ्‍नो मन शुद्ध पार। तिमीहरू रोओ, चिच्‍याओ र विलाप गर। तिमीहरूका हाँसोको खित्‍का रुवाइमा बदल। तिमीहरूका आनन्‍द दु:खमा बदलिओस्‌। प्रभुको अघि नम्र बन र उहाँले तिमीहरूलाई उचाल्‍नुहुनेछ। दाजुभाइहरू, कसैको विरुद्ध नराम्रो नभन। आफ्‍ना विश्‍वासी दाजु वा भाइको विरुद्ध नराम्रो भन्‍ने र दोष लगाउने व्‍यक्ति व्यवस्थाकै विरोधमा बोल्‍छ र व्यवस्थालाई दोष लगाउँछ। तिमीले व्यवस्थाको न्‍याय गर्‍यौ भने तिमी यसको पालना गर्ने होइन तर न्‍याय गर्ने बन्‍छौ। परमेश्‍वर मात्र व्यवस्था दिने र न्‍याय गर्ने हुनुहुन्‍छ। बचाउने र नाश गर्न सक्‍ने उहाँ मात्र हुनुहुन्‍छ। आफैंलाई के सम्‍झन्‍छौ र आफ्‍नो छिमेकीहरूलाई दोष लगाउँछौ? “आजै कि भोलि हामी कुनै सहर, बजारमा जाऔंला र एक वर्ष बसेर व्‍यापार गरौंला अनि धन कमाऔंला” भन्‍ने तिमीहरूले मेरो कुरा सुन। भोलि के हुन्‍छ, तिमीहरू केही जान्‍दैनौ। तिमीहरू त एक छिन देखा पर्ने र बिलाएर जाने बाफजस्‍तै छौ। तिमीहरूले भन्‍नुपर्ने कुरा त यसो हो, “परमेश्‍वरको इच्‍छा भयो भने हामी बाँचेर यो गरौंला वा त्‍यो गरौंला।” तर तिमीहरू घमण्‍डी छौ र खुब धाक लगाउँछौ। यसरी घमण्‍ड गर्नु राम्रो होइन। कसैले राम्रो गर्नुपर्छ भनी जानेर पनि त्‍यो गर्दैन भने उसलाई पाप लाग्‍छ।
१ तिमोथी २:४
तब परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “अब हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔं। तिनीहरूले माछा, चरा-चुरुङ्गी, ठूला-साना सबै घरपालुवा र जङ्‌गली पशुहरूमाथि अधिकार गरून्।”
 तब येशू नजिक आएर तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “हेर, स्‍वर्ग र पृथ्‍वीको सबै अधिकार मलाई दिइएको छ। अब तिमीहरू गएर सबै मानिसहरूलाई मेरा चेलाहरू बनाओ। तिनीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्‍माको नाउँमा बप्‍तिस्‍मा देओ। तिनीहरूलाई मैले आज्ञा गरेका सबै कुराहरू मान्‍न सिकाओ। अनि हेर, म सधैँभरि, अँ संसारको आखिरी दिनसम्‍मै तिमीहरूसँगै रहनेछु।”
 हे अल्‍छी मानिस! कमिलाका चाल-ढङ्गबाट पाठ सिक्। तिनीहरूका कुनै अगुवा, मुखिया वा शासक हुँदैन, तर ग्रीष्‍म ऋतुमा तिनीहरूले आफ्‍ना खाना बटुल्‍दछन् र जाडोको समयको लागि भण्‍डार तयारी गर्छन्।
“मैले तँलाई तेरी आमाको कोखमा सृष्‍टि गर्नुभन्दा अघि नै रोजेको थिएँ र तँ जन्‍मनुअघि नै जाति-जातिहरूलाई अगमवाणी सुनाउन अलग गरेको थिएँ।”
उहाँले संसार सृष्‍टि गर्नुभन्दा अघि नै ख्रीष्‍टमा हामीलाई आफ्‍ना सामु पवित्र र निर्दोष पार्न छान्‍नुभएको थियो।
अब हामी विश्‍वास गर्नेहरूचाहिँ परमेश्‍वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्‍यस विश्रामको ठाउँमा पस्‍नेछौं। जसो उहाँले भन्‍नुभयो, “यसकारण मैले रिसमा शपथ खाएर भनें, ‘तिनीहरू कहिल्‍यै पनि मेरो विश्रामको ठाउँमा पस्‍न पाउनेछैनन्’!” सृष्‍टि गरिसक्‍नुभएदेखि नै परमेश्‍वरका सबै काम पूरा भए तापनि उहाँले यसो भन्‍नुभयो।
 यस्‍तै कुरा धर्मशास्‍त्रमा पनि लेखिएको छ, “परमेश्‍वरको अगाडि कुनै मानिस पनि ठीक छैन, अहँ एउटै पनि। परमेश्‍वरलाई बुझ्‍ने मानिस कोही छैन नता कसैले परमेश्‍वरको खोजी नै गरेका छन्। सबैले बाटो बिराएका छन् र सबै काम नलाग्‍ने भएका छन्, असल काम गर्ने एक जना पनि छैन,।” “तिनीहरूको घोक्रो खुल्ला चिहानजस्‍तै छ, तिनीहरूले आफ्‍नै जिब्राले ढाँटेका छन्,।” “तिनीहरूको बोली विषालु सर्पको विषजस्‍तो छ,।” “तिनीहरूले सरापिरहन्‍छन् र मनको तीतो पोखाइरहन्‍छन्,।” “तिनीहरू मानिस मार्न छिटा छन्। तिनीहरू जहाँ-जहाँ जान्‍छन्, त्‍यहाँ-त्‍यहाँ मृत्‍यु र दु:ख फैलाउँछन्। शान्‍तिको बाटो तिनीहरूले चिनेका छैनन्,।” “नता परमेश्‍वरको डरै मानेका छन्,।”
 “मेरो वचन पृथ्‍वीलाई भिजाउन आकाशबाट झर्ने वर्षा र हिउँजस्‍तो छ; त्‍यसले जमिन नभिजाई फर्कंदैन र त्‍यसले छर्नलाई बिउ र खानालाई भोजन दिन्‍छ। मेरो मुखबाट निस्‍कने वचन पनि त्‍यस्‍तै छ, मैले इच्‍छा गरेको काम त्‍यसले पूरा गरिछोड्‍नेछ, जुन काम गर्न म त्‍यसलाई पठाउनेछु, ती पूरा गरिछोड्‍नेछ।
 हाम्रा निम्‍ति एउटा बालक जन्‍मेका छन्! हामीलाई एउटा पुत्र दिइएको छ! उनले हामीमाथि राज्‍य गर्नेछन्। उनको नाम “उदेकका सल्‍लाहकार,” “पराक्रमी परमेश्‍वर,” “सनातनका पिता,” “शान्‍तिका राजकुमार” हुनेछ। उनको राज्‍य-शक्ति बढिरहनेछ, उनको राज्‍यमा सधैँ शान्‍ति रहनेछ। दाऊद राजापछि आउने राजा उनी नै हुनेछन्। न्‍याय र धर्ममा खडा भई अबदेखि उसो सदाका निम्‍ति उनले राज्‍य गर्नेछन्। सर्वशक्तिमान् परमप्रभुले आफ्‍नो जोशमा यी सबै गर्नुहुनेछ।
“परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरले अरू कति कुरा गुप्‍त राख्‍नुभएको छ। तर उहाँले आफ्‍नो नियम प्रकट गरिदिनुभएको छ अनि हामी र हाम्रा सन्‍तानले सधैँ ती मान्‍नुपर्छ।
 त्‍यसै गरी परमेश्‍वरलाई पनि आफ्‍नो क्रोध र शक्ति देखाउने इच्‍छा छ तर उहाँले आफ्‍नो क्रोधको भाँडालाई जस्‍तै नाश गर्न सुहाउने मानिसलाई पनि धेरै सहेर बस्‍नुभयो। अनि उहाँले हामीलाई धेरै ठूलो शक्ति र महिमाको सम्पत्ति देखाउन चाहनुभयो। हामी उहाँको दया गरिने भाँडा भयौं। उहाँले हामी दया पाउनेहरूलाई आफ्‍नै ठूलो आदरको लागि तयार गर्नुभएको छ किनभने उहाँले बोलाउनुभएका हामीहरू नै हौं। उहाँले इस्राएलीहरूलाई मात्र डाक्‍नुभएन तर अन्यजातिका मानिसहरूलाई पनि डाक्‍नुभयो।
१ पत्रुस २:९-१०
 तर तिमीहरू त छानिएका जन, राजकीय पूजाहारी, पवित्र जाति, तिमीहरूलाई अन्‍धकारबाट अचम्‍मको उज्‍यालोमा ल्‍याउनुहुने परमेश्‍वरका आफ्‍नै प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई उहाँको उदेकका कामहरू प्रचार गर्न छान्‍नुभएको हो। पहिले त तिमीहरू परमेश्‍वरका प्रजा थिएनौ। तर अहिले परमेश्‍वरका प्रजा भएका छौ। पहिले तिमीहरूले परमेश्‍वरको दया पाएका थिएनौ, अहिले उहाँको दया पाएका छौ।
 यस जीवनमा हामीले भोगेका दु:खहरूलाई हामीमा पछि देखा पर्ने सुख सम्‍मान्‌सँग तुलना गर्न सकिन्‍न। परमेश्‍वरले आफ्‍ना छोरा-छोरी देखाउनुहुने दिन सारा सृष्‍टिले ठूलो चाख मानेर पर्खिरहेको छ। किनभने सृष्‍टि नै काम नलाग्‍ने भएको थियो तर यसो भएको सृष्‍टिको आफ्‍नै इच्‍छाले थिएन। सृष्‍टिले आशा गरिरहोस् भनी परमेश्‍वरले नै यसो गर्नुभएको थियो। सृष्‍टि आफैंले पनि नाशको कैदबाट एक दिन छुटकारा पाएर परमेश्‍वरका छोरा-छोरीको महान् छुटकारामा सहभागी हुनेछ। अहिलेसम्‍म सुत्‍केरीलाई व्‍यथा लागेको झैँ पूरा सृष्‍टि दु:खले कनिरहेको छ। तर सृष्‍टि मात्र होइन, पवित्र आत्‍माले पछि ल्‍याउने सुख-सम्‍मान्‌को स्‍वाद पाउने हामी पनि परमेश्‍वरको बाटो हेरेर भित्र-भित्रै कष्‍टले कनिरहेका छौं किनभने उहाँले हामीलाई आफ्‍ना छोरा-छोरी बनाएर हाम्रो शरीरलाई नाश हुन नदिई बचाउनुहुन्‍छ र यसैलाई स्‍वर्गीय शरीर बनाउनुहुन्‍छ किनभने ठूलो आशाको लागि परमेश्‍वरले हामीलाई बचाउनुभयो अनि हामी त्‍यही आशामा बाँचिरहेका छौं। आशा भनेको हामीले कुनै चीजको लागि पर्खिरहनु हो। मानिसले पहिले नै पाइसकेको कुराको आशा राख्‍तैन। तर यदि हामीले नदेखेको कुराको आशा राख्‍छौं भने हामीले यसको लागि पर्खन्‍छौं।
 परमेश्‍वरले यी वचनहरू भन्‍नुभयो, “म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ, तिमीहरू दास-दासी भएर बसेका मिश्रदेशबाट मैले तिमीहरूलाई निकाली ल्‍याएँ। “मबाहेक अरू कुनै देवता-देवीलाई तिमीहरूले नपुज्‍नू। “तिमीहरूले आफ्‍नो लागि स्‍वर्ग वा पृथ्‍वी वा पृथ्‍वीमुनि पानीमा भएको कुनै पनि कुराको मूर्ति नबनाउनू। तिमीहरूले कुनै मूर्तिलाई नढोग्‍नू न त तिनीहरूको पूजा नै गर्नू किनभने म तिमीहरूका परमेश्‍वर परमप्रभु हुँ अनि कोही मजस्तै हुन खोजेको म सहन्‍नँ। मलाई घृणा गर्नेहरूलाई तिनीहरूका सन्‍तानका तेस्रो र चौथो पुस्‍तासम्‍म म दण्‍ड दिनेछु। तर जसले मलाई प्रेम गर्छ र मेरा आज्ञा मान्‍छ, तिनीहरूका हजारौँ पुस्‍ताहरूमाथि म मेरो प्रेम देखाउनेछु। “कुनै खराब उद्देश्यको निम्ति मेरो नाम नलिनू किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ र मेरो नामको दुरुपयोग गर्नेलाई म दण्‍ड दिनेछु। “विश्रामको दिन मान्‍ने गर र त्‍यस दिनलाई पवित्र राख। तिमीहरू आफ्‍ना काम छ दिनसम्‍म गर, तर सातौँ दिनचाहिँ मलाई अर्पण गरिएको विश्रामको दिन हो। त्‍यो दिन कसैले काम नगर्नू। तिमीहरू, तिमीहरूका छोरा-छोरी, कमारा-कमारी, गाई-वस्‍तु र तिमीहरूका देशमा बास गर्ने परदेशी, कसैले पनि केही काम गर्नेछैन। म परमप्रभुले छ दिनमा पृथ्‍वी, आकाश, समुद्र र त्‍यहाँ भएका सबै थोक बनाएँ र सातौँ दिनमा विश्राम लिएँ। त्‍यसैकारण म परमप्रभुले विश्रामको दिनलाई आशिष् दिएर पवित्र पारें। “आफ्‍ना आमा-बुबालाई आदर गर र मैले दिएको देशमा तिमीहरू धेरै दिनसम्‍म बाँच्‍नेछौ। “तिमीहरूले हत्‍या नगर्नू। “तिमीहरूले व्‍यभिचार नगर्नू। “तिमीहरूले चोरी नगर्नू। “तिमीहरूले कसैलाई झूटो दोष नलाउनू। “तिमीहरूले अर्काका घर, स्‍वास्‍नी, कमारा-कमारी, गाई-गोरु, गधा वा अरू कुनै कुराको पनि लालच नगर्नू।”